Job 6 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
6 Job wee zaa, sị: 2 A sị nnọọ na a tụrụ nsogbu+ m dum n’ihe ọ̀tụ̀tụ̀,A sịkwa nnọọ na a ga-atụkwasị ahụhụ m n’ihe e ji atụ̀ ihe n’otu mgbe! 3 N’ihi na ọ dị arọ karịa ájá dị n’oké osimiri.Ọ bụ ya mere okwu m ji bụrụ okwu nzuzu.+ 4 N’ihi na akụ́ nke Onye Pụrụ Ime Ihe Niile dị n’ime m,+Nke mmụọ m na-aṅụ nsí ya;+Oké ụjọ nke si n’ebe Chineke nọ ji m.+ 5 Ịnyịnya ọhịa+ ọ̀ ga-eti mkpu mgbe ọ na-ata ahịhịa,Ka ehi ọ̀ ga-eti mkpu mgbe ọ na-ata nri ya? 6 À ga-eri ihe na-enweghị ụtọ n’etinyeghị ya nnu,Ka mmiri na-alọ alọ nke ahịhịa mashmalo ò nwere ụtọ ọ bụla? 7 Mkpụrụ obi m ajụla imetụ ihe ọ bụla aka.Ha dị ka ọrịa n’ihe oriri m. 8 A sị nnọọ na ihe m na-arịọ ga-eme,A sịkwa nnọọ na Chineke ga-emezu olileanya m! 9 Nakwa na Chineke ga-aga n’ihu gwepịa m,Na ọ ga-ewepụta aka ya bipụ m!+ 10 Ọbụna nke ahụ gaara akasi m obi;M ga-amali elu n’ihi ọṅụ+ n’ihe mgbu m,Ọ bụ ezie na ọ gaghị enwe ọmịiko, n’ihi na ezochighị m ihe Onye Nsọ+ kwuru.+ 11 Olee ike m nwere, nke na m ga na-echere?+Gịnịkwa ga-abụ njedebe m, nke na m ga-eme ka mkpụrụ obi m nọgide na-adị ndụ? 12 Ike m ọ̀ bụ ike nkume?Ka è ji ọla kọpa mee ahụ́ m? 13 Ọ̀ bụ na enweghị m ike inyere onwe m aka,Ka à napụwokwa m ike ịrụ ọrụ bara uru? 14 Onye ọ bụla nke jụrụ igosi mmadụ ibe ya obiọma,*+Ya onwe ya agakwaghị atụ egwu Onye Pụrụ Ime Ihe Niile.+ 15 Ụmụnne m aghọwo aghụghọ,+ dị ka ngele,Dị ka ngele ndị na-ata ata. 16 Mkpụrụ mmiri emeela ka ha na-eji oji,N’elu ha ka snoo na-ezo onwe ya. 17 Mgbe oge ruru, mmiri anaghị adịkwa na ha,+ ha adịkwaghị eme mkpọtụ;Mgbe okpomọkụ bịara, ha na-ata.+ 18 Ụzọ ha si asọfe gbagọrọ agbagọ;Ha na-asọba n’ọzara wee taa. 19 Ìgwè ndị njem nke Tima+ elewo anya ịhụ ha,Ìgwè ndị Siba,+ ndị nọ na-eme njem, echerewo ha. 20 Ihere na-eme ha n’ihi na ha nweburu nchekwube;Ha abịarutewo ebe ahụ ma ha ahụghị ihe ha tụrụ anya ya.+ 21 Otú ahụkwa, o nweghị ihe unu bụ;+Unu hụrụ ihe dị egwu, egwu wee jide unu.+ 22 Ọ̀ bụ n’ihi na m sịrị, ‘Nyenụ m ihe,Ma ọ bụ, ka unu si n’ihe unu nwere nye onyinye n’ihi m; 23 Napụtanụ m n’aka onye iro,+Napụtakwanụ m n’aka ndị na-achị n’aka ike’?+ 24 Zienụ m ihe, mụ onwe m ga-agbakwa nkịtị;+Meekwanụ ka m ghọta ihe ọ bụla m mehieworo.+ 25 Okwu ziri ezi adịghị egbu mgbu!+Ma olee isi mba unu na-abara m?+ 26 Ihe unu bu n’obi ime ọ̀ bụ ịtụchasị okwu,Ebe ihe onye dara mbà n’obi na-ekwu+ bụ naanị ifufe ka ọ na-agwa?+ 27 Lezienụ ka unu ga-esi fee nza ọbụna maka nwa na-enweghị nna,+Jirikwa enyi unu gbanwere ihe!+ 28 Ngwa, geenụ m ntị,Leenụ ma m̀ ga-agha ụgha+ n’ihu unu. 29 Biko, chegharịanụ echiche—ka ajọ omume ọ bụla ghara ibilite—Ee, chegharịanụ echiche—ezi omume m ka dịkwa.+ 30 Ajọ omume ọ̀ dị n’ire m,Ka ọ̀ bụ na adịghị m amata ihe bụ́ ahụhụ?